Ngaba ukhuseleko lomzimba wonke wealuminium luqinisekisiwe ngendlela yokulungisa |
Ukuxolelwa kweAluminiyam ngesantya esiphezulu
Ukuxolelwa kwealuminium ezithuthi
IAluminiyam zokuxolelwa kwendwangu
I-aluminium zokulibala isithuthuthu
Enye into eyenziwe ngealuminium
Izixhobo ezizenzekelayo zoomatshini
Ukuhamba ngenqwelomoya kwealuminium
Izixhobo zeemoto zentambo
IAluminiyam ingxubevange extrusion
Ngaba ukhuseleko lomzimba wonke wealuminium luqinisekisiwe ngendlela yokulungisa
Ukusetyenziswa kwealuminium kwiimoto kubonisa imeko eyandayo unyaka nonyaka. Zininzi iimodeli ezisebenzisa ialuminium ngokuyinxenye okanye ngokupheleleyo. Inkqubo yokuhambisa imoto ISETYENZISA izinto zealuminium, ezinganeli nje ukomelela kunye nobukhali, kodwa zikwanokuqhuba kakuhle kobushushu. Iinyani zibonakalisile ukuba ukusetyenziswa kwealuminium ezimotweni kufezekisile izibonelelo ezilungileyo zentlalo nezoqoqosho.
Ukhuseleko lwealuminium yezithuthi
1, ialuminiyam izisa iingenelo zokwakha, intsimbi nayo ibalulekile
Njengoko kusaziwa kubo bonke, xa kuthelekiswa nentsimbi yesiqhelo, izinto zealuminium zinokuxela kwangaphambili imeko yokungqubana ekuqaleni koyilo, kwaye ziqinisekise ubume kunye nendawo yokugcina ukungqubana. Ke ngoko, umzimba wealuminium unokuluphucula ukhuseleko lwezithuthi ukuya kuthi ga kwinqanaba elithile kwaye ufezekise ukusebenza okungcono kuvavanyo lwengozi.
Nangona amanye amandla esivuno sealuminiyam ingxubevange inokufikelela ngaphezulu kwe-500-600 mpa kunye neembambano zentsimbi ngokubanzi, kodwa kumandla athile abalulekileyo, okwangoku akulunganga njengokuqina kwentsimbi eyomeleleyo, ke kwezinye iindawo ezibalulekileyo ziya kusebenzisa Ukuqiniswa kwesinyithi samandla aphezulu, njengoluhlu lwe-rover aluminium yomzimba, kunye ne-4% yentsimbi ephezulu yamandla kunye ne-1% ye-thermoforming ye-ultra-high steel strength.
2, ukunciphisa ubunzima bokwenza iziqhoboshi, ulawulo lokhuseleko ukuya kwinqanaba eliphezulu
Ngapha koko, ukhuseleko lomzimba wealuminium alubonakalisi kuphela kulwakhiwo kunye neempawu ezibonakalayo, kodwa lukwadlala indima enkulu ekwakhiweni kwezithuthi kunye nokuphathwa kwesithuthi. Iilori zeF-150 zeF-150, umzekelo, inobunzima obungama-318kg ngaphantsi komanduleli wayo ngenxa yomzimba wayo wonke. I-inertia yesithuthi incitshiswe kakhulu kwaye umgama we-braking unciphise kakhulu. Kungenxa yoko le nto i-F-150 ifumana awona manqanaba aphezulu okhuseleko lweenkwenkwezi ezintlanu kuLawulo lweSizwe loKhuseleko eziNdleleni, olunika inqanaba eliphezulu lokhuseleko kuneemodeli ezifanayo. Kwaye ngenxa yokuba ialuminium inempawu zokumelana nokubola, inokunika isithuthi umjikelo wobomi ozinze ngakumbi.
Iimfuno zehardware yolondolozo lomzimba wealuminium
1. Umatshini okhethekileyo wokukhusela igesi kunye nomatshini wokulungisa imo yomzimba wealuminium
Ngenxa yokunyibilika okuphantsi kwealuminium, ukusombulula ngokulula, iimfuno zeewelding zangoku, kufuneka ke usebenzise umatshini okhethekileyo wealuminium yomzimba okhuselekileyo. Umatshini wokulungisa ubume awunakufana nomatshini oqhelekileyo wokulungisa imilo ukucofa nokuzoba, unokusebenzisa kuphela umatshini okhethekileyo womzimba wokulungisa umatshini we-welding muon, usebenzisa i-muon nail stretcher yokuzoba.
2. Izixhobo zokulungisa umzimba zealuminium kunye nemipu enamandla
Eyahlukileyo kulungiso lwemoto lwengozi yemveli, ukulungiswa komzimba wealuminium ubukhulu becala yindlela yokurhabaxa, ekufuneka ibe nompu oqinileyo. Kwaye ukulungiswa kwezixhobo zomzimba zealuminium kufuneka kunikezelwe, akunakuxutywa kunye nolondolozo lwezixhobo zomzimba zentsimbi. Emva kokulungisa umzimba wensimbi, isinyithi esilahliweyo siya kushiyeka kwizixhobo. Ukuba isetyenziselwa ukulungisa umzimba wealuminium, isinyithi esilahliweyo siya kufakwa kumphezulu wealuminium, sibangele umhlwa kwialuminium.
3. Ukuqhuma uthuli-ubungqina benkqubo yokuqokelela uthuli
Kwinkqubo yokupolisha umzimba wealuminium, kuya kubakho umgubo wealuminium omninzi, umgubo wealuminiyam awunabungozi emzimbeni womntu kuphela, kodwa unakho nokutsha kunye nokudubula, ngenxa yoko kubalulekile ukuba uqokelele uthuli-ubungqina bokuqhushumba kunye nenkqubo yokucoca ukufunxa i powder aluminium ngexesha.
4. Indawo yolondolozo ezimeleyo
Ngenxa yeemfuno ezingqongqo zenkqubo yokulungisa umzimba we-aluminium, ukuqinisekisa umgangatho wokugcina kunye nokusebenza kokhuseleko, ukunqanda umgubo we-aluminium kungcoliseko lomhlangano kunye nokuqhushumba, kubalulekile ukuseta isikhululo somzimba se-aluminium esahlukileyo. Ukongeza, abasebenzi bokugcina umzimba be-aluminium ukwenza uqeqesho lobuchule, bayazi kakuhle ulondolozo lwenkqubo yokugcinwa komzimba we-aluminium, indlela yokubeka umzobo, i-welding, i-riveting, i-bonding njalo njalo.
Inqaku lokusebenza kokugcinwa komzimba wealuminium
1, aluminium ingxubevange ipleyiti eqine yasekuhlaleni akulunganga, kulula ukuba aqhekeze. Umzekelo, kuba imilo yeplate yangaphakathi ye-injini hood inzima ngakumbi, ukuze kuphuculwe ukuqina kokusebenza komzimba ngexesha lokwenziwa kwe-alloyum yamandla e-aluminium, uloluko luye ngaphaya kwe-30%, ke kulondolozo Ukuqinisekisa ukuba imilo ayitshintshi kangangoko, ukuthintela iintanda.
Ukuchaneka kwesilinganiselo akubikho lula ukusiqonda, kwaye ukubuyela umva kunzima ukulawula. Indlela yokukhupha uxinzelelo ngamaqondo obushushu asezantsi kufuneka amkelwe kangangoko kulondolozo ukuze luzinze ngaphandle kweziganeko zesiphene ezinje ngokubuya kwentwasahlobo.
3, kuba ialuminiyam ithambile kunentsimbi, ukungqubana kunye nokubambelela ngothuli kulondolozo kuya kubangela ukonakala komhlaba, imikrwelo kunye nezinye iziphene, ke kubalulekile ukwenza ukucoca ukungunda, ukucoca izixhobo, uthuli lokusingqongileyo, ungcoliseko lomoya kunye nezinye izinto. Thatha amanyathelo afanelekileyo ukuqinisekisa ukuthembeka kwamalungu.
Ngenxa yokulunga kwayo kokusebenza, i-aluminium alloy isetyenziswa ngakumbi emzimbeni weemoto, ukhuseleko lwealuminium alloy unokuqinisekiswa. Ukongeza ulondolozo lomzimba wemoto lukwasebenza ngokukuko, ngeenkcukacha ezithe vetshe nceda unxibelelane nathi.
Ixesha Post: Nov-01-2020
I-Kunshan Chenshun aluminium eyakha i-Co., LTD